နာမည်ကြီး ကိုရီးယား ကြက်ခြေထောက်အစပ် Dakbal ကို လွယ်လွယ်မြန်မြန် လုပ်ကြမယ်.. - For her Myanmar
နာမည်ကြီး ကိုရီးယား ကြက်ခြေထောက်အစပ် Dakbal ကို လွယ်လွယ်မြန်မြန် လုပ်ကြမယ်..
ကိုရီးယားကားတွေ ကြည့်ပြီး သွားရည်ကျနေစရာ မလိုတော့ပါဘူးနော်.. 😛
ကြက်ခြေထောက်ဟင်းကို ထိုင်းစတိုင်၊ လာအိုစတိုင် စသဖြင့် အမျိုးမျိုး လုပ်စားကြပါတယ်။ ခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ကိုရီးယားဆန်ဆန်လေး လုပ်စားကြည့်ရအောင် ယောင်းတို့ရေ…
ကိုရီးယားစတိုင်ကြက်ခြေထောက်ကို Dakbal လို့ ခေါ်ပြီး သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အစပ်အရသာကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်။ Dakbal ကို challenge အနေနဲ့သာမက Mukbang အနေနဲ့လည်း စားကြပါတယ်။
Dakbal ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးချက်ပြုတ်ကြပါတယ်။ အက်ဒ်မင်ကတော့ ပုံစံနှစ်မျိုးကိုပြောပြပေးပါမယ်နော်။
Related Article >>> ကြက်ခြေထောက်ကို ထိုင်းစတိုင် ပုံစံ သုပ်စားကြမယ်
ပထမ ချက်နည်းကတော့ ကင်တဲ့နည်းပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ အကြီး သုံးတက်
ခရုဆီတစ်ဇွန်း နဲ့ ချင်း ပါပဲ။
ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ ကြက်ခြေထောက်ကို အရိုးမလွတ်တဲ့ ကြက်ခြေထောက် သုံးပါမယ်။ အရင်ဆုံး ကြက်ခြေသည်းတွေကို ညှပ်ပစ်ပြီးရင် ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာ ကြက်ခြေထောက်တွေကို ပင်လယ်ဆားတစ်ဇွန်း (ထမင်းစားဇွန်း) နဲ့ ရေအနည်းငယ် ထည့်ပြီး တစ်မိနစ်ခန့် သေချာဆုပ် နယ်ပေးပါ။
ပြီးရင် ဆယ့်နှစ် မိနစ်ကျော် စိမ်ထားပေးပါ။ အချိန်ပြည့်သွားတဲ့အခါ ရေလောင်းထည့်၊ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဆေးပေးပြီး ရေတွေသွန်ပစ်ရပါမယ်။ ပြီးသွားတဲ့အခါ ကြက်ခြေထောက်တွေကို ပေါင်းအိုးထဲ ၁နာရီခန့် ပေါင်းထားပေးပါ။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့…. ဟင်းအနှစ် လုပ်ပါမယ်….
ဒီနေရာမှာ ငရုတ်သီးပမာဏ က အရေးကြီးပါတယ်။ အရမ်းစပ်ချင်ရင် ငရုတ်သီးကို ၆တောင့် ထည့်နိုင်ပြီး သိပ်မစပ်ချင်ရင် ၄တောင့်လောင့် ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အစပ်မစားနိုင်ရင်တော့ ၂တောင့်လောက်ပဲ ထည့်ပါ။
ကြိတ်စက်အသေးလေးထဲကို ငရုတ်သီးတောင့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ အကြီး ၃တက်၊ ချင်းတစ်မလက်ခန့် ထည့်ပြီး ကြိတ်တာ (သို့) ငရုတ်ဆုံထဲကို ညက်အောင်ထည့်ထောင်းတာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
ပြီးရင် ဂိုချူဂျန် တစ်ဇွန်း၊ သကြားတစ်ဇွန်း၊ခရုဆီ တစ်ဇွန်း၊ soy sauce တစ်ဇွန်း၊ ငရုတ်သီးမှုန့် တစ်ဇွန်း ထည့်ပြီး ရောမွှေလိုက်ပေးပါ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ဇွန်းဆိုတာ ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ငရုတ်ကောင်း မှုန့် စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်းထပ်ထည့်ပြီး သမအောင် မွှေလိုက်ရင် ဟင်းအနှစ်ရပါပြီ။
တတိယအဆင့် ကင်ပါတော့မယ်။ ပေါင်းထားတဲ့ ကြက်ခြေထောက်တွနဲ့ ဟင်းအနှစ်ကို သမအောင် နယ်ပေးပြီးရင်တော့ ကင်စက်ပေါ်မှာ စကင်လို့ရပါတယ်။
တစ်ဖက်စီကို ၄မိနစ်ခန့် ကင်ပြီးရင်တော့ စားသုံးလို့ရပါပြီ… အရမ်းလည်း မတူးပါစေနဲ့နော် နည်းနည်းလေး တူးတာက အဆင်ပြေပါတယ်။
မစားခင်မှာ နှမ်းဆီမွှေးလေး ဆမ်းပြီး ကြက်သွန်မြိတ်လှီးထားတာနဲ့ နှမ်းစေ့လေးတွေ ဖြူးပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ပိုအရသာရှိအောင်လို့ပါ။
ဒါလေးကတော့ ကင် ထား တဲ့ Dakbal ပါ (photo credit to google)
Related Article >>> ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အရသာတွေထုံမွှမ်းနေတဲ့ ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်လုပ်နည်း
ဒုတိယနည်းကတော့ ဟင်းအိုးထဲထည့်ချက်တဲ့ နည်းပါ။
ကြက်ခြေထောက်တွေကို ဆားရေထဲ ပြောင်အောင်ဆေးပြီး ခဏစိမ်ထားပါ။ ပြီးရင် မိနစ်လေးဆယ်ခန့် ပြုတ်ပါမယ်။ မိနစ်လေးဆယ်ပြည့်တဲ့အခါ ကြက်ခြေထောက်တွေကို ဆယ်ပြီး ခဏလောက် အအေးခံထားပါမယ်။
ပထမနည်းအတိုင်း ဟင်းအနှစ်လုပ်ထားပါ။ ဟင်းအနှစ်လုပ်ပြီးရင် ဒယ်အိုးထဲကို ဆီအနည်းငယ်(ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းခန့်) ထည့်ပြီး မီးအပူကို အသင့်အတင့်ပေးပါမယ်။ ဆီမပူခင်မှာတင် ဟင်းအနှစ်နဲ့ အရိုးလွတ်ကြက်ခြေထောက်တွေကို ထည့်ပြီး ချက်ပါမယ်။
ချက်နေရင်း အနှစ်တွေ အိုး မကပ်သွားအောင် ရေကို အနည်းငယ် ထည့်ပေးရပါမယ်နော်။ ငါးမိနစ်ကျော်လို့ ဟင်းအနှစ်တွေ ခမ်းသလောက်ရှိတဲ့အခါ အိုးပေါ်ကနေ ချလို့ရပါပြီ။ အိုးပေါ်က ချပြီးရင်တော့ ငရုတ်သီးအစိမ်းနှစ်တောင့်ကို ပါးပါးလေး လှီးပြီး အပေါ်က နေ ဖြူးပေးတာ ဒါမှမဟုတ် နှမ်းနဲ့ ကြက်သွန်မြိတ် ဖြူးပေးတာမျိုးလုပ်ပြီး စားနိုင်ပါတယ်။
ဒါလေးက ချက် ထား တာ ( photo credit to googleပါ)
ဘိုဆန်ချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ cheese နဲ့လည်း တွဲဖက်စားနိုင်ပါတယ်။ Cheese နဲ့ စားရတာ ကြိုက်ရင် mozarrella cheese သို့မဟုတ် ကြိုက်ရာ cheese တစ်ဘူးကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ မကပ်တဲ့ ဒယ်အိုးထဲမှာ cheese တစ်ဘူး/ တစ်တုံး/တစ်ထုပ်ကို ထည့်ပြီး အရည်ပျော်အောင် အပူပေးပါ။
အရည်ပျော်သွားတဲ့အခါ cheese အနှစ်ရပါပြီ။ အဲ့ cheese အနှစ်ကို ကြက်ခြေထောက်ဟင်းပေါ် ဆမ်းပေးပါ။
မကပ်တဲ့ ဒယ် အိုး မရှိရင်တော့ cheese အပြား လေး၊ငါးပြားလောက်ကို ကြက်ခြေထောက်ဟင်းချက်နေတဲ့ အိုးပေါ် တခါတည်း အုံပြီး ထည့်ချက်နိုင်ပါတယ်နော်။decorationအနေနဲ့ cheese အမှုန်လေးတွေ ထပ်ဖြူးပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
ဒါဆိုရင်တော့….အနောက်တိုင်းနဲ့ အရှေ့တိုင်းကို ရောနှောထားတဲ့ ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ကို ရပါပြီရှင်…သြော် ဒါနဲ့….ကိုရီးယားစတိုင် ကြက်ခြေထောက်စပ် ရဲ့ တွဲဖက်တွေက ဆိုဂျူနဲ့ ဆလပ်ရွက်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့နော်
Reference links: Kwon’s corner , K.K’s kitchen , Seonkyoung Longest
ကိုရီးယားကားတှေ ကွညျ့ပွီး သှားရညျကနြစေရာ မလိုတော့ပါဘူးနျော.. 😛
ကွကျခွထေောကျဟငျးကို ထိုငျးစတိုငျ၊ လာအိုစတိုငျ စသဖွငျ့ အမြိုးမြိုး လုပျစားကွပါတယျ။ ခုတဈခေါကျမှာတော့ ကိုရီးယားဆနျဆနျလေး လုပျစားကွညျ့ရအောငျ ယောငျးတို့ရေ…
ကိုရီးယားစတိုငျကွကျခွထေောကျကို Dakbal လို့ ချေါပွီး သူ့ရဲ့ ထူးခွားတဲ့ အစပျအရသာကွောငျ့ နာမညျကွီးပါတယျ။ Dakbal ကို challenge အနနေဲ့သာမက Mukbang အနနေဲ့လညျး စားကွပါတယျ။
Dakbal ကို ပုံစံအမြိုးမြိုးခကျြပွုတျကွပါတယျ။ အကျဒျမငျကတော့ ပုံစံနှဈမြိုးကိုပွောပွပေးပါမယျနျော။
Related Article >>> ကွကျခွထေောကျကို ထိုငျးစတိုငျ ပုံစံ သုပျစားကွမယျ
ပထမ ခကျြနညျးကတော့ ကငျတဲ့နညျးပါ။
ကွကျသှနျဖွူ အကွီး သုံးတကျ
ခရုဆီတဈဇှနျး နဲ့ ခငျြး ပါပဲ။
ပထမ အဆငျ့အနနေဲ့ ကွကျခွထေောကျကို အရိုးမလှတျတဲ့ ကွကျခွထေောကျ သုံးပါမယျ။ အရငျဆုံး ကွကျခွသေညျးတှကေို ညှပျပဈပွီးရငျ ခှကျတဈခှကျထဲမှာ ကွကျခွထေောကျတှကေို ပငျလယျဆားတဈဇှနျး (ထမငျးစားဇှနျး) နဲ့ ရအေနညျးငယျ ထညျ့ပွီး တဈမိနဈခနျ့ သခြောဆုပျ နယျပေးပါ။
ပွီးရငျ ဆယျ့နှဈ မိနဈကြျော စိမျထားပေးပါ။ အခြိနျပွညျ့သှားတဲ့အခါ ရလေောငျးထညျ့၊ နောကျတဈကွိမျပွနျဆေးပေးပွီး ရတှေသှေနျပဈရပါမယျ။ ပွီးသှားတဲ့အခါ ကွကျခွထေောကျတှကေို ပေါငျးအိုးထဲ ၁နာရီခနျ့ ပေါငျးထားပေးပါ။
ဒုတိယအဆငျ့အနနေဲ့…. ဟငျးအနှဈ လုပျပါမယျ….
ဒီနရောမှာ ငရုတျသီးပမာဏ က အရေးကွီးပါတယျ။ အရမျးစပျခငျြရငျ ငရုတျသီးကို ၆တောငျ့ ထညျ့နိုငျပွီး သိပျမစပျခငျြရငျ ၄တောငျ့လောငျ့ ထညျ့နိုငျပါတယျ။ အစပျမစားနိုငျရငျတော့ ၂တောငျ့လောကျပဲ ထညျ့ပါ။
ကွိတျစကျအသေးလေးထဲကို ငရုတျသီးတောငျ့၊ ကွကျသှနျဖွူ အကွီး ၃တကျ၊ ခငျြးတဈမလကျခနျ့ ထညျ့ပွီး ကွိတျတာ (သို့) ငရုတျဆုံထဲကို ညကျအောငျထညျ့ထောငျးတာမြိုး လုပျပေးပါ။
ပွီးရငျ ဂိုခြူဂနျြ တဈဇှနျး၊ သကွားတဈဇှနျး၊ခရုဆီ တဈဇှနျး၊ soy sauce တဈဇှနျး၊ ငရုတျသီးမှုနျ့ တဈဇှနျး ထညျ့ပွီး ရောမှလေိုကျပေးပါ။ ဒီနရောမှာ တဈဇှနျးဆိုတာ ထမငျးစားဇှနျး တဈဇှနျးကို ဆိုလိုပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ ငရုတျကောငျး မှုနျ့ စားပှဲတငျဇှနျး တဈဇှနျးထပျထညျ့ပွီး သမအောငျ မှလေိုကျရငျ ဟငျးအနှဈရပါပွီ။
တတိယအဆငျ့ ကငျပါတော့မယျ။ ပေါငျးထားတဲ့ ကွကျခွထေောကျတှနဲ့ ဟငျးအနှဈကို သမအောငျ နယျပေးပွီးရငျတော့ ကငျစကျပျေါမှာ စကငျလို့ရပါတယျ။
တဈဖကျစီကို ၄မိနဈခနျ့ ကငျပွီးရငျတော့ စားသုံးလို့ရပါပွီ… အရမျးလညျး မတူးပါစနေဲ့နျော နညျးနညျးလေး တူးတာက အဆငျပွပေါတယျ။
မစားခငျမှာ နှမျးဆီမှေးလေး ဆမျးပွီး ကွကျသှနျမွိတျလှီးထားတာနဲ့ နှမျးစလေ့ေးတှေ ဖွူးပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။ ပိုအရသာရှိအောငျလို့ပါ။
ဒါလေးကတော့ ကငျ ထား တဲ့ Dakbal ပါ (photo credit to google)
Related Article >>> ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ ခဉျြခဉျြစပျစပျ အရသာတှထေုံမှမျးနတေဲ့ ကွကျခွထေောကျခဉျြစပျလုပျနညျး
ဒုတိယနညျးကတော့ ဟငျးအိုးထဲထညျ့ခကျြတဲ့ နညျးပါ။
ကွကျခွထေောကျတှကေို ဆားရထေဲ ပွောငျအောငျဆေးပွီး ခဏစိမျထားပါ။ ပွီးရငျ မိနဈလေးဆယျခနျ့ ပွုတျပါမယျ။ မိနဈလေးဆယျပွညျ့တဲ့အခါ ကွကျခွထေောကျတှကေို ဆယျပွီး ခဏလောကျ အအေးခံထားပါမယျ။
ပထမနညျးအတိုငျး ဟငျးအနှဈလုပျထားပါ။ ဟငျးအနှဈလုပျပွီးရငျ ဒယျအိုးထဲကို ဆီအနညျးငယျ(ထမငျးစားဇှနျး ၂ဇှနျးခနျ့) ထညျ့ပွီး မီးအပူကို အသငျ့အတငျ့ပေးပါမယျ။ ဆီမပူခငျမှာတငျ ဟငျးအနှဈနဲ့ အရိုးလှတျကွကျခွထေောကျတှကေို ထညျ့ပွီး ခကျြပါမယျ။
ခကျြနရေငျး အနှဈတှေ အိုး မကပျသှားအောငျ ရကေို အနညျးငယျ ထညျ့ပေးရပါမယျနျော။ ငါးမိနဈကြျောလို့ ဟငျးအနှဈတှေ ခမျးသလောကျရှိတဲ့အခါ အိုးပျေါကနေ ခလြို့ရပါပွီ။ အိုးပျေါက ခပြွီးရငျတော့ ငရုတျသီးအစိမျးနှဈတောငျ့ကို ပါးပါးလေး လှီးပွီး အပျေါက နေ ဖွူးပေးတာ ဒါမှမဟုတျ နှမျးနဲ့ ကွကျသှနျမွိတျ ဖွူးပေးတာမြိုးလုပျပွီး စားနိုငျပါတယျ။
ဒါလေးက ခကျြ ထား တာ ( photo credit to googleပါ)
ဘိုဆနျခငျြရငျတော့ ဒီနရောမှာ cheese နဲ့လညျး တှဲဖကျစားနိုငျပါတယျ။ Cheese နဲ့ စားရတာ ကွိုကျရငျ mozarrella cheese သို့မဟုတျ ကွိုကျရာ cheese တဈဘူးကို သုံးနိုငျပါတယျ။ မကပျတဲ့ ဒယျအိုးထဲမှာ cheese တဈဘူး/ တဈတုံး/တဈထုပျကို ထညျ့ပွီး အရညျပြျောအောငျ အပူပေးပါ။
အရညျပြျောသှားတဲ့အခါ cheese အနှဈရပါပွီ။ အဲ့ cheese အနှဈကို ကွကျခွထေောကျဟငျးပျေါ ဆမျးပေးပါ။
မကပျတဲ့ ဒယျ အိုး မရှိရငျတော့ cheese အပွား လေး၊ငါးပွားလောကျကို ကွကျခွထေောကျဟငျးခကျြနတေဲ့ အိုးပျေါ တခါတညျး အုံပွီး ထညျ့ခကျြနိုငျပါတယျနျော။decorationအနနေဲ့ cheese အမှုနျလေးတှေ ထပျဖွူးပေးဖို့လညျး မမပေ့ါနဲ့။
ဒါဆိုရငျတော့….အနောကျတိုငျးနဲ့ အရှတေို့ငျးကို ရောနှောထားတဲ့ ဟငျးကောငျးတဈခှကျကို ရပါပွီရှငျ…သွျော ဒါနဲ့….ကိုရီးယားစတိုငျ ကွကျခွထေောကျစပျ ရဲ့ တှဲဖကျတှကေ ဆိုဂြူနဲ့ ဆလပျရှကျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့နျော
Tags: dakbal, Famous, Food, korean, Recipes, Style, trend
Aye Mon Kyaw April 27, 2019